Siny kosmetika, tavoahangy fanosotra, tavoahangy fanosotra amin'ny maso, tavoara akrilika - Sich
15ml Amboaran-tarehy kely akrilika ambony sokajy ...
SHAOXING SICH COSMETICS fonosana voafetra
SHAOXING SICH COSMETICS PACKING LIMITED [Orinasa plastika Yuyao Langrun] dia mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra fonosana plastika any Shina, hita ao amin'ny tanànan'i Yuyao. Ny orinasanay dia mandrakotra manodidina ny 1.000 metatra toradroa.
ny vokatray dia vokatra fonosana plastika indrindra. Manarona ny lisitry ny vokatra: tavoahangy fanosotra plastika sy tavoahangy fanosotra, tavoahangy akrilika ， tavoahangy PP / PS sy tavoahangy ， compact make-up, fonosana fantsika ary kojakoja kosmetika hafa. Miompana indrindra amin'ny orinasa miorina amin'ny fanondranana izahay, ary manome vahaolana fonosana ho an'ny marika kosmetika malaza maro any an-trano sy any ivelany.
Manana famolavolana sy fanaovana ekipa ao an-trano izahay, milina haingon-doko miloko automatique, pirinty lamba vita amin'ny landy ary milina fanaovana hajia mafana ho an'ny fametahana marika sy maodely isan-karazany amin'ny milina tsindrona sy mitsoka. Izy rehetra dia handray anjara amin'ny vokatra avo lenta ary hanaterina haingana kokoa
Fa maninona no fonosana kosmetika no dif ...
Amin'izao fotoana izao, ny 14% ny fonosana plastika manerantany ihany no voaverina - ny 5% fotsiny amin'ireo fitaovana ampiasaina indray ...
Maro amin'ireo fonosana no vita o ...
Ny ankamaroan'ny fonosana dia vita amin'ny vera na acrylic. Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahita bebe kokoa ...
Fanadihadiana momba ny tombony sy ...
Ny tsenan'ny tavoahangy plastika eran-tany dia antenaina hitombo be mandritra ny vanim-potoana mialoha. Gr ...
Tavoahangy tsy misy rivotra vaovao Arrival –...
Ny tavoahangy paompy tsy misy vy dia miaro ny vokatra mora tohina toy ny menaka fikarakarana hoditra voajanahary, serum, ...
Kaontenera vovoka kosmetika miaraka amin'ny sivana, Polonina tavoahangy mainty, Tavoahangy fanosotra amin'ny maso, Kaontenera fanosotra kosmetika, Fonosana kosmetika vita amin'ny tavoahangy, Tavoahangy fanosotra kosmetika,